Global Voices teny Malagasy » Ny Fahasarotan’ny Fananganana Fiarahana Hanohitra an’i Trump Amin’ny Fomba Mivelatra Sy Andraisan’ny Vehivavy Anjara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2017 13:21 GMT 1	 · Mpanoratra Nidia Bautista Nandika (fr) i Suzanne Lehn, avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Fanoherana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Ny Diaben'ny Vehivavy tao Washington DC. Sary: Elly Clarke tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC 2.0.
Antsasaka tapitrisa ireo vehivavy sy mpifanome tànana amin'izy ireo no tafavory nandray anjara tamin'ilay Diaben'ny Vehivavy tao Washington renivohitr'i Etazonia ny 21 Janoary teo, hiaro ny zon'ireo vehivavy sy ho valin'ny fanokanana an'i Donald Trump ho filohan'i Etazonia. Hetsika iray nanainga fanahy ka niteraka “diabe rahavavy ” an-jatony nanerana ny tany, iray tamin'ireny ny tao Los Angeles izay nahasarika olona tsy latsaky ny 650.000.
Isan'ny fampiraisana fototra  tamin'ireny diabe ireny ny fampitsaharana ny herisetra sy ny fiarovana ny zo ara-pananahana, ny zon'ny mpiasa, ireo sembana ary ireo vitsy an'isa (miainga amin'ny fampitahàna ny isan'ny lahy sy ny vavy), ny zo sivily, ny fahafahana manaraka izay finoana tiana, ny fifindràmonina ary ny rariny ara-tontolo iainana. Fifidianana ho filoham-pirenena nahitàna betsaka ny resaka fanavakavahana ara-poko, fankahalàna silamo ary ny fanambaniana vehivavy, ankoar'ireo kabarim-pankahalàna hafa, no tena fanamby nampitain'ilay hafatra.
Vantany vao nandresy teny anivon'ireo Amerikana mpifidy vaventy i Trump, nanomboka tena naka ny endriny ilay hevitra hanao Diaben'ny Vehivavy. Ny 9 Novambra 2016, ny ampitson'ny fifidianana, namorona hetsika iray tao amin'ny Facebook ny vehivavy iray antsoina hoe Teresa Shook, nanasàny ny olona hanao diabe mankany Washington mba hanao hetsi-panoherana ny fahalanian'i Trump. Nisy vehivavy sasany namorona hetsika mitovitovy amin'izany ihany koa, ary nanapaka hevitra tsikelikely ny hanambatra ny ezak'izy ireo amin'ilay Diaben'ny Vehivavy ho any Washington.
Nony farany, nipoitra ho toy ny mpiara-mitarika ny fandrindràna ireo hetsika fanentanana rehetra i Tamika D. Mallory, endrika tsy zoviana amin'ny maro, mpitaky ny zo sivily ho an'ireo Afro-Amerikàna ; ilay meksikàna-amerikana mpikatroka, Carmen Perez, ary i Linda Sarsour, miozolmana palestiniana-amerikàna mpikatroka. Izao no natao dia ny mba hahazoana antoka fa hita ao anatin'ireo lohandohan'ny mpitarika ny hetsika ireo vehivavy hafa volonkoditra—fiteny iray fampiasan'ny rehetra ao Etazonia hilazàna ireo vehivavy tsy fotsy hoditra rehefa miresaka fanoherana ny fanavakavahana volonkoditra sy fanilikilihana ara-drafitra.
Carmen Perez, mpiara-mitantana nasionaly, no tale mpanatanteraka ny Famoriambahoaka ho an'ny Rariny  (Eng), fikambanana iray miorina ao New-York izay mikatsaka ny hampitsahatra ny fampidirana am-ponja ireo ankizy ary ny tsy fitoviana ara-poko any anatin'ny fitsaràna famaizana ao an-toerana. Mpikatroka efa hatry ny elabe i Perez, nahazo diplaoma tao UC Santa Cruz, nanorina ireo fikambanana zatovo hafa fihodirana toy ny R.E.A.L. (Reforming Education, Advocating for Leadership) sy ny Girls Task Force [Vovonana Fiadian-kevitry ny Tovovavy].
Hanambatra ny hery hatrany isika satria miankina amin'ny an'ny hafa ny fanafahana antsika !
“Chicana” teraka tao Oxnard, tanàna kely iray ao Kalifôrnia atsimo, vao haingana no nanazavàn'i Perez tao amin'ny tranonkala latina, Mitu,  ireo anton'ny firotsahany an-tsehatra amin'ilay diabe :
Nahatsiaro ho manana andraikitra manoloana ny vondrom-piarahamonina misy ahy aho, indrindra fa Meksikana-Amerikana ny tena, avy any Meksika ny reniko ary Chicano avy ao Kalifôrnia ny raiko. Kabary feno fanavakavahana mikendry ny vondrom-piarahamonina misy ahy no nataon'io filoha io. Hitako fa manana ny lanjany ny fandehanana eny amin'ny lohalaharana amin'io diabe io.
Inona no antenainy amin'ilay diabe ?
Tiako mba hasehony hoe rehefa mifamory ao anaty firaisana hina ny vehivavy dia tena afaka tokoa mamorona fotoana iray fanararaotra ho an'ireo vehivavy hafa, sady koa hiantohanay hoe tapa-kevitra izahay sady ahitàna ireo sakelika rehetra momba ny olana mavesa-danja aminay.
Raha maro no nanaiky ny fahitàna ireo vehivavy hafa fihodirana tao anatin'ny mpitarika ilay diabe, dia hita taratra ireo fanehoankevitra momba ilay diabe, ireo fanehoankevitr'ireo vehivavy hafa fihodirana sy ny vondrom-piarahamonin'ireo vehivavy mitia vehivavy, ny lehilahy mitia lehilahy, ny pelaka, ny manana taova roa sns… (LGBTQIA) miaraka amin'izay fijerin'ny sasany azy ho toy ny hetsika iray izay voabahan'ny hetsiky ny mpiaro ny maha-vehivavy fotsy hoditra.
Talohan'ny diabe, ireo vehivavy hafa fihodirana mpanoratra sy mpikatroka dia namoaka lahatsoratra  nanakiana ilay hetsika tamin'ny tsy fisian'ny mangarahara momba ny herisetra manan-tantara manjo ireo vehivavy hafa fihodirana. Noho ny tsy fisiana vehivavy hafa fihodirana hatrany am-piandohany tao anatin'ny fitarihana, be ny ahiahy nateraky ny anarana niandohany, ny “Diaben'ireo Vehivavy An-Tapitrisa” dia niaraka nandray fanapahana hanao fihetsiketsehana tamin'ny 1997, nataon'ireo vehivavy mainty hoditra hanoherana ny famoretana noho ny foko niaviana sy ny maha-vehivavy, ary ny tsy fahatsapàna fisian'ny fanakianana manohitra ny fanavakavahana  avy amin'ireo mpandray anjara, betsaka ireo vehivavy hafa fihodirana no nibodo tsy nandray anjara tamin'ilay diabe tao Washington tamin'ny 21 Janoary. 
Nametraka fepetra manandanja ihany koa ny vondrom-piarahamonin'ireo nanova taovam-pananahana. Betsaka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ilay diabe no “nisatroka bonetra miendrika totoky / lalanjaza”  mavokely no sady nilanja sorabaventy mitory fiarovana ny fivaviany sy ny taovam-pananahany. Notohanan'ireo vehivavy nanova taovam-pananahana fa ny fampiasàna ny tranonjaza ho marika hamantarana ny maha-vehivavy dia maneho fankahalàna azy ireo. Nangataka tamin'ireo vehivavy manambady lehilahy ry zareo mba hanao ny tolon'izy ireo ho an'ny zo mivelatra kokoa amin'ny resaka fiterahana . Ny fampiasàna ny atodinaina sy ny tranonjaza ho toy ny mariky ny fanoherana dia mitondra mankany amin'ny hetsika ho an'ny zo hiteraka, ary ny fampiasàna ny “fivaviana” amin'ny diaben'ny vehivavy dia nikendrena ihany koa hamaliana ny tenin'i Trump momba ireo fihetsika ara-nofo mahery setra ataony amin'ny vehivavy : “Raiso amin'ny fivaviany ry zareo, dia ho azonareo atao amin'izay ilànareo azy.” Voarakitra an-tsary i Trump fony izy niteny ireo fanambaniana ireo teo amin'ny lampihazon'ny fahitalavitry ny olomalaza iray ao Etazonia, saingy nandritry ny fampielezankeviny tamin'ny Oktobra 2016 vao nisy namboraka ho fanta-bahoaka izy ireny.
Na izany na tsy izany, tsy isalasalàna ny firotsahana an-tsehatra nataon'ireo izay betsaka no nanjohy ilay diaben'ny vehivavy tamin'ity volana ity ho an'ny fiarovana ny maha-vehivavy avy amin'ny sakelika rehetra  — ny hevitra hoe mazàna no avy aminà vondrona voahilikilika ireo vehivavy, mpisehatra traikefa izay manefy ihany koa ny fiainan'izy ireny .
Tamin'ny tenifototra #WhyIMarch  (‘Nahoana aho no mitanjozotra / manao diabe’), betsaka ireo vehivavy sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQIA no nizara ny antony nandrisika ny fandraisana anjaran'izy ireo. Ny fanamafisana ny firotsahan'izy ireo hiaro tena, hiaro ny zo ho an'ny fahasalamana ara-pananahana ; an-jatony ireo vehivavy hafa fihodirana no nanoratra tao amin'ny media sôsialy ny antony nanaovan-dry zareo ilay hetsi-panoherana :
Afaka miaina ve aho ?
Mba ho afaka mijanona ho mpivady izaho ry ramatoa vadiko.
Ho an'ny maro amin'ireo vehivavy hafa fihodirana, na nanao ilay diabe ny 21 Janoary izy na tsia, anjomara antso fanairana ho amin'ny fikatrohana ny fankahalàna vahiny sy ny fanavakavahana miparitaka eran'ireo media sôsialy sy ireo fepetra voalohany nataon'ny fitantanan'i Trump.
Ora vitsy monja taorian'ilay Diaben'ny Vehivavy tao Washington, nisy niampanga tety anaty aterineto i Linda Sarsour, mpiara-mitantana nasiônaly an'ilay diabe, hoe manana fifandraisana amin'ny Hamas, fikambanana iray raisin'i Etazonia, Israely, ny Fiombonambe Eoropeana ary firenena hafa maro ho toy ny mpampihorohoro. Tsy ela ny #IMarchWithLinda (‘Miara-dàlana amin'i Linda aho’) dia lasa fironana teny anaty media sôsialy rehefa injay an-jatony ireo vehivavy sy fikambanana nizara ny fanohanan'izy ireo an'ilay mpikatroka.
Tao anatin'ny kabariny, ny andron'ny diabe, nalefa mivantana tamin'ny ABC News, dia navoitran'i Sarsour ny filàna miatrika ny hoavy amim-pahasahiana sy firotsahana miaraka aminà firaisankina midadasika eo amin'ny samy vehivavy :
Safidy ny tahotra, izahay no maro an'isa, izahay no fahatsiarovantenan'i Etazonian'i Amerika, izahay no tondro-avaratry ny maoralinareo. Ry rahalahy sy ranabavy, raha te-hahazo antoka ianareo fa hoe mizotra amin'ny làlana tsara, ireo vehivavy hafa volonkoditra arahana. Fantatray ny tsy maintsy izoranay ary fantatray hoe aiza no misy ny rariny.
Hatrany amin'ireo andro voalohany nandraisany ny asany, noporofoin'ny Filoha Trump fa notazoniny ny toky nomeny amin'ny haneriterena ny fahafahana miditra amin'ny fanalàna zaza sy ireo tolotra momba ny fahasalamana ara-pananahana. Ny 23 Janoary, toy ireo filoha repoblikana tsirairay nanomboka tamin'i Ronald Reagan tamin'ny 1984, naverin'i Trump ho amin'ny toerany ny “Politikan'i Meksika”, antsoina ihany koa hoe Global Gag Rule .
Ny ‘Fitsipiky ny Tampimbava Faobe’ dia mandràra ireo fikambanana iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny fahasalamàna mandray fanohanana ara-bola avy amin'i Etazonia tsy hanonona ny fanalàna zaza ho toy ny safidy handrindràna ny fahaterahana eny anivon'ny ankohonana. Ho an'ny sasany amin'ireo manampahaizana, io fepetra io, raha ny marina, dia hampitombo ny isan'ny fanalàna zaza atao an-tsokosoko,  ary hampihena ny fahafahan'ireo vehivavy mahazo fikarakaràna ara-pahasalamàna momba ny fananahana.
Ndeha hiverenana ny ao Etazonia, dia efa mila miomana hiatrika olana ny Planned Parenthood (Fandrindràna Fiainam-pianakaviana), fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola, loha-laharana amin'ny fisahanana ny fahasalamana ara-pananahana, raha toa tonga amin'izay iriany ireo Repoblikana mpanohitra ny fanalàna zaza. Nanome toky ny filoha lefitra, Mike Pence, fa hotapahany ny famatsiana vola ho azy io, mba hanakànana ireo vehivavy kely fidirambola tsaboina any amin'ny sehatry ny fanjakana tsy hihazakazaka hanatona ny toeram-pitsaboan'io fikambanana io. Hoy i “I Stand With Planned Parenthood ,” ny fanafoanana ireny famatsiambola ireny sy ny fahatongavana hatrany amin'ny fanakatonana ireo toeram-pitsaboana dia hahavoa mafy tokoa ireo mahantra avy amin'ny hafa fihodirana, amin'ny tsy fanomezana ireo sokajy ireo ny fahafahana manao fitiliana ny homamiadana, ny fandrindràna fiterahana, ny fitiliana ny MST ary ireo fikarakaràna hafa hatramin'ny fitsirihana ny otrikaretina sida— sasansatsany amin'ireo tolotra omen'ny Planning Familial ankoatry ny resaka fanalàna zaza.
Fiarahana mihoatra lavitra noho ny fahasamihafàna
Ho an'ireo mpikarakara ny Diaben'ny Vehivavy tao Washington, mitovy lanja amin'ny fametrahana diabe iray nahomby ny fananganana fifanomezan-tànana iray. Ho an'ny fitantanana mandritry ny fotoana maharitra, natombok'izy ireo ny fanentanana 10 Actions/100 jours ,(asa 10/ andro 100) izay mandrisika ireo vehivavy mpandray anjara hanohy ny fikatrohan'izy ireo.
Ny zavatra voalohany andrisihana ny olona mba hataony dia ny hanoratany karatra fandefa paositra momba ireo olana fototra, halefa ho an'ny loholon'izy ireo, ary ny fomba eritreretin'izy ireo hanohizana ny tolona hiadiana amin'ny fitantanan'i Trump.
Raha mbola misy ny tsy fitoviankevitra momba ny Diaben'ny Vehivavy, toa betsaka ihany ireo vehivavy hafa fihodirana sy mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQIA no mifanaraka fa zavadehibe ny mitolona manohitra ireo politikan'ny fitondràn'i Trump.
Nandritra ilay famoriambahoaka tao Washington tamin'iny Sabotsy iny, nampita ity antso ho an'ny fanoheran'ny mpandàla ny maha-vehivavy manohitra an'i Trump ity ilay mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo no sady endrika malazan'ny fanoherana kolontsaina, Angela Davis  :
Ireo andro 1.459 ho avy amin'ny fitantanan'i Trump dia ho andro 1.459 hisian'ny fanoherana: fanoherana eny an-kianja, fanoherana any anaty efitrano fianarana, fanoherana any am-piasàna, fanoherana ao anatin'ny taokantontsika sy ny mozikantsika. Vao ny fanombohany fotsiny io, ary toy ny nambaran'ilay tsy misy toa azy Ella Baker, ‘Isika izay mino ny fahalalahana ary tsy hanana fitsaharana raha tsy tonga izany’
*sarikely an'i Micah Bazant. Nahazoana alàlana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/30/95009/
 diabe rahavavy: http://www.essence.com/news/womens-march-washington-sister-marches-international
 fampiraisana fototra: https://www.womensmarch.com/principles/
 Famoriambahoaka ho an'ny Rariny: http://www.gatheringforjustice.org/
 fahatsapàna fisian'ny fanakianana manohitra ny fanavakavahana: https://www.bustle.com/articles/201378-what-every-white-woman-attending-the-womens-march-needs-to-know
 nibodo tsy nandray anjara tamin'ilay diabe tao Washington tamin'ny 21 Janoary.: https://www.colorlines.com/articles/why-im-skipping-womens-march-washington-opinion
 “nisatroka bonetra miendrika totoky / lalanjaza”: https://www.pussyhatproject.com/
 zo mivelatra kokoa amin'ny resaka fiterahana: http://everydayfeminism.com/2015/11/trans-women-reproductive-justice/
 tenin'i : https://www.nytimes.com/2016/10/08/us/donald-trump-tape-transcript.html?_r=0
 fiarovana ny maha-vehivavy avy amin'ny sakelika rehetra: http://www.vox.com/identities/2017/1/17/14267766/womens-march-on-washington-inauguration-trump-feminism-intersectionaltiy-race-class
 fanalàna zaza atao an-tsokosoko,: https://www.buzzfeed.com/jinamoore/trump-just-slapped-an-anti-abortion-rule-on-foreign-aid?utm_term=.iqRB7X4DN#.lmONqx208
 10 Actions/100 jours: https://www.womensmarch.com/100
 Angela Davis: https://fr.wikipedia.org/wiki/Angela_Davis